Airlander 10 dara ụgbọ elu nke abụọ wee daa na ọdịda | Akụkọ akụrụngwa
Naanị ụbọchị isii gara aga anyị kwuru maka Airlander 6 na ụgbọ elu ule mbụ ya mgbe ọ bụ ngwaọrụ ezubere iji ya na United States Army mana n'ikpeazụ ọ rere ya na HAV, ụlọ ọrụ na-eji nnukwu ihe ugbu a ugbo elu nke Ogologo 92 mita na mita 43,5 n’obosara. Nke bụ eziokwu bụ na ụgbọ elu nke mbụ gara nke ọma dịka anyị kwuru n'ụbọchị ahụ, mana n'ule nke abụọ ụgbọ elu a rụrụ, ọ dara n'isi mbụ n'ala n'oge ọdịda. Omume nke ihe a niile na na e bipụtara ya ozugbo mgbe ihe mberede ahụ gasịrị bụ na ọ dịghị mkpa iru uju nke ndị ọ tara.
N'aka nke ọzọ, Airlander 10 a nwere nnukwu mmerụ ahụ na, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, dị mma, ụlọ ọrụ ahụ atụghị anya ịnwe ha n'ụbọchị nke abụọ nke ụgbọ elu. Edere oge ihe mberede ahụ na vidiyo na ebe anyị na-ahapụ gị oge nke ihe omume:
Ihe ọghọm nke ọdịda dara na Bedforshire Airport, UK n'agbanyeghịkwa na ọ dị ka ọ na-eji nwayọ aga, mmebi nke ụlọ ahụ abụwo ihe dị mkpa n'ihi ibu na nha nke ngwaọrụ ahụ, yana ịda n'elu ya.
Ndị ọ bụ ha kpatara nke a Airlander 10 chọrọ oghere nke 100 mita iji rụọ ebe ndị a ma wepụ ya, Ha ka na-enyocha ihe merenụ wee na-achọ ọdịda ọ ga-ekwe omume nke mere na ụgbọ elu nke abụọ a mechara mebie nke ahụ. Eziokwu bụ na na mbu ekwuru na ngwaọrụ ahụ kụrụ ogwe osisi ike tupu ya adaa, mana nke a yiri ka ụlọ ọrụ ahụ ekwetaghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Airlander 10 dara ụgbọ elu nke abụọ ma daa na ọdịda
Ihe ngosi Samsung Galaxy Note 7 gbawara wee gbaa